शीर्षकमा बाइबल पदहरू: धन -> जीवन
१ तिमोथी 6:17-19
 अहिले यस संसारमा धनी हुनेहरूलाई घमण्‍डी नहुनू भन। तिनीहरूका धन-सम्‍पत्ति सधैँ रहने होइन तर हाम्रो सुखका लागि प्रशस्‍त गरी सबै कुरा दिने परमेश्‍वरमै भरोसा राख भनेर आज्ञा देओ। भलाइको काम गर्नू, भलाइको काममा धनी हुनू, खुला मनको हुनू र अरूलाई दिन तयार हुनू भनी तिनीहरूलाई भन। यसरी तिनीहरूले पछि आफ्‍नो साँचो जीवनमा काम लाग्‍ने धनसम्‍पत्ति जम्‍मा गरून् र उनीहरूले साँचो जीवन जोगाइराख्‍न सक्‍नेछन्।
 येशू यरीहो सहर भएर जाँदै हुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यस सहरमा जखायस नाउँ भएका धनी मानिस कर उठाउनेहरूका हाकिम थिए। उनले येशूलाई हेर्न खोज्‍दै थिए। तर उनी पुड्का थिए र मानिसहरूको घुइँचोले गर्दा उनले येशूलाई देख्‍न सकेनन्। त्‍यसकारण येशूलाई हेर्न उनी दगुर्दै अगाडि गएर एउटा जङ्गली नेभाराको रूखमा चढे। येशू त्‍यही बाटो भएर आउँदै हुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यस ठाउँमा आइपुगेपछि येशूले मास्‍तिर हेरेर जखायसलाई भन्‍नुभयो, “ए जखायस, झट्टै तल ओर्लेर आऊ! आज म तिम्रो घरमा बास बस्‍नुपरेको छ।” जखायसले खुसी हुँदै तुरुन्‍तै ओर्लेर येशूको स्‍वागत गरे। यो देखेर सबै जना यसो भन्‍दै गनगनाउन लागे, “यी मानिस त पापीको घरमा पो बास बस्‍न जाँदै छन्!” तर जखायसले प्रभुको अगाडि उभिएर भने, “सुन्‍नुहोस् हजुर, अब म आफ्‍नो धन-सम्‍पत्तिको आधा भाग गरीबहरूलाई बाँडिदिनेछु अनि कसैलाई करकापमा पारेर केही लिएको छु भने म त्‍यसको चार गुणा फिर्ता पनि गरिदिनेछु।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “आज यस घरले उद्धार पाएको छ। जखायस पनि त अब्राहामकै सन्‍तान हुन्। म मानव पुत्र हराएकालाई नै खोज्‍न र बचाउन भनेर आएको हुँ।”
तिनीहरूले परमेश्‍वरको शिक्षा सुन्‍न त सुन्‍छन्, तर यस संसारको चिन्‍ता, धन-सम्‍पत्तिको माया र त्‍यस्‍तै तिर्सनाहरूले गर्दा त्‍यो शिक्षा हराएर जान्‍छ र कुनै पनि फल फलाउँदैनन्।
 कुनै एक जना इस्राएली शासकले येशूलाई सोधे, “हे असल गुरु, अजम्‍मरी जीवन पाउन मैले के गर्नुपर्छ?” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमी किन मलाई असल भन्‍छौ? परमेश्‍वरबाहेक कोही पनि असल छैन। परमेश्‍वरका व्यवस्थाका आज्ञाहरू त तिमीलाई थाहै छ, व्‍यभिचार नगर्नू, मान्‍छे नमार्नू, नचोर्नू, झूटो साक्षी नदिनू अनि आमा-बुबाको आदर गर्नू।” तिनले जवाफ दिए, “यी सबै आज्ञा त मैले सानैदेखि मान्‍दै आएको छु।” यो सुनेर येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीले अझै एउटा काम गर्न बाँकी छ, तिमीसँग भएका सबै कुरा बेचेर गरीबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीले स्‍वर्गीय धन पाउनेछौ अनि मेरो पछि लाग।” यो कुरा सुनेर तिनी साह्रै खिन्‍न भए किनभने तिनी असाध्‍यै धनी थिए। तिनी खिन्‍न भएको देखेर येशूले भन्‍नुभयो, “देख्‍यौ त, धनी मानिसलाई परमेश्‍वरको राज्‍यमा पस्‍न कस्‍तो गाह्रो हुँदो रहेछ। धनी मानिसलाई परमेश्‍वरको राज्‍यमा पस्‍नुभन्दा त बरु ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्न सजिलो होला!” यो कुरा सुन्‍नेहरूले उहाँलाई सोधे, “त्‍यसो भए कसले मुक्ति पाउन सक्‍छ त?” येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिँदै भन्‍नुभयो, “यो मानिसबाट हुनै नसक्‍ने काम भए पनि परमेश्‍वरबाट चाहिँ हुन सक्‍छ।” तब पत्रुसले भने, “हेर्नुहोस्, हामीले घरबार नै छोडेर तपाईंलाई पछ्याएका छौं।” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, परमेश्‍वरको राज्‍यको निम्‍ति आफ्‍ना आमा-बुबा, दाजुभाइ, जहान, छोरा-छोरी र घरबार छोड्‍नेले अहिले नै त्‍योभन्दा बढी पाउनेछ अनि आउने युगमा चाहिँ अजम्‍मरी जीवन पाउनेछ।”
म धनी छु र मलाई केही कुराको कमी छैन भनेर तिमी भन्‍छौ र तिमी कति दु:खी र दयालाग्‍दो कङ्गाल, अन्‍धा र नाङ्गा छौ भन्‍ने तिमीलाई थाहा छैन।
 येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “कुनै धनी मानिसको काम गर्नेहरूको एक जना नाइके थियो। ‘त्‍यस नाइकेले तपाईंको सम्‍पत्ति उडाउँदै छ’ भन्‍ने कुरा मानिसहरूले ती धनी मानिसलाई सुनाए। तिनले त्‍यस नाइकेलाई बोलाएर सोधे, ‘मैले तिम्रो बारेमा यो के सुन्‍दै छु? तिम्रो सबै हिसाबकिताब मलाई बुझाऊ। अबदेखि तिमी नाइके हुन सक्‍दैनौ।’ त्‍यसो हुँदा नाइकेले मनमनै सोच्‍यो, ‘मेरो मालिकले मलाई नोकरीबाट निकाल्‍ने भए। अब म के गरूँ? खनजोत गरेर खाऊँ भने खन्‍ने बल नै छैन, भिक्षा मागूँ भने मलाई लाज लाग्‍छ।
 अनि येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई डाकेर भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, यस गरीब विधवाले अरू सबै मानिसहरूले भन्दा धेरै भेटी चढाएकी छिन् किनभने अरूले त आफ्‍नो उब्रिएको धनबाट केही चढाएका हुन्, तर यस विधवाले चाहिँ गरीब भएर पनि उसको जीविका चलाउने भएभरको सबै खर्च चढाएकी छिन्।”
 येशू यरीहो सहर भएर जाँदै हुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यस सहरमा जखायस नाउँ भएका धनी मानिस कर उठाउनेहरूका हाकिम थिए। उनले येशूलाई हेर्न खोज्‍दै थिए। तर उनी पुड्का थिए र मानिसहरूको घुइँचोले गर्दा उनले येशूलाई देख्‍न सकेनन्। त्‍यसकारण येशूलाई हेर्न उनी दगुर्दै अगाडि गएर एउटा जङ्गली नेभाराको रूखमा चढे। येशू त्‍यही बाटो भएर आउँदै हुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यस ठाउँमा आइपुगेपछि येशूले मास्‍तिर हेरेर जखायसलाई भन्‍नुभयो, “ए जखायस, झट्टै तल ओर्लेर आऊ! आज म तिम्रो घरमा बास बस्‍नुपरेको छ।” जखायसले खुसी हुँदै तुरुन्‍तै ओर्लेर येशूको स्‍वागत गरे। यो देखेर सबै जना यसो भन्‍दै गनगनाउन लागे, “यी मानिस त पापीको घरमा पो बास बस्‍न जाँदै छन्!” तर जखायसले प्रभुको अगाडि उभिएर भने, “सुन्‍नुहोस् हजुर, अब म आफ्‍नो धन-सम्‍पत्तिको आधा भाग गरीबहरूलाई बाँडिदिनेछु अनि कसैलाई करकापमा पारेर केही लिएको छु भने म त्‍यसको चार गुणा फिर्ता पनि गरिदिनेछु।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “आज यस घरले उद्धार पाएको छ। जखायस पनि त अब्राहामकै सन्‍तान हुन्। म मानव पुत्र हराएकालाई नै खोज्‍न र बचाउन भनेर आएको हुँ।” येशू यरूशलेमको नजिकै आइपुग्‍नुभएको थियो। मानिसहरू परमेश्‍वरको राज्‍य अब चाँडै आउँछ भन्‍ने सम्‍झेर उहाँका कुरा सुनिरहेका थिए। त्‍यसो हुँदा उहाँले एउटा दृष्‍टान्‍त दिएर तिनीहरूलाई परमेश्‍वरको राज्‍यको बारेमा यस्‍तो कथा भन्‍नुभयो, “कुनै एक जना ठूला मानिसले निकै टाढा देशमा गएर आफ्‍नो देशको राजा बनेर फर्कने विचार गरे। जानुभन्दा अघि तिनले आफ्‍ना दश जना नोकरहरूलाई बोलाए अनि हरेकलाई एक-एक वटा असर्फी दिएर भने, ‘म फर्केर नआउञ्‍जेल यस असर्फीले व्‍यापार गरेर नाफा निकाल।’ तर आफ्‍नो देशका मानिसहरूले चाहिँ तिनलाई मन पराउँदैनथे। त्‍यसैले तिनी गएपछि उनीहरूले यसो भनेर बिन्‍ती पठाए, ‘यो मानिस राजा भएको हामी चाहँदैनौं।’ “तर ती मानिस राजा भएर नै फर्किए। आउनेबित्तिकै उनले नोकरहरूलाई व्‍यापार गरेर कति कमाए भनी सोध्‍न बोलाए। पहिलो नोकरले आएर भन्‍यो, ‘हजुर, तपाईंले दिनुभएको एउटा असर्फीले मैले दश वटा असर्फी कमाएर ल्‍याएको छु।’ राजाले तिनलाई भने, ‘स्‍याबास! तिमी असल नोकर रहेछौ! तिमी सानो कुरामा भरपर्दो भएकोले म तिमीलाई दश सहरको हाकिम बनाउनेछु।’ दोस्रो नोकरले आएर भन्‍यो, ‘हजुर, तपाईंले दिनुभएको एउटा असर्फीले मैले पाँच वटा कमाएर ल्‍याएको छु।’ राजाले त्‍यसलाई भने, ‘तिमी पाँच सहरको हाकिम हुनेछौ।’ अर्को नोकरले आएर भन्‍यो, ‘हजुर, मैले तपाईंको असर्फी रुमालमा लुकाएर राखें, यो यहीँ छ। मलाई तपाईंदेखि डर लाग्‍यो किनभने तपाईं कठोर मानिस हुनुहुन्‍छ। तपाईं त आफूले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि नाफा खोज्‍नुहुन्‍छ र आफूले नलगाएको बाली काटेर लिनुहुन्‍छ।’ राजाले त्‍यसलाई भने, ‘ए बदमाश नोकर, तेरै मुखको बोलीले म तँलाई दोषी ठहराउँछु। म कठोर मानिस छु, आफूले लगानी नगरेको ठाउँबाट नाफा खोज्‍ने र आफूले नलगाएको बाली काटेर लिने भनेर तँलाई थाहै रहेछ। त्‍यसो भए तैँले मेरो पैसा किन ब्‍याजमा लगाइनस् त? ब्‍याजमा लगाइदिएको भए म फर्केर आउँदा केही नभए पनि ब्‍याजसम्‍म त पाउने थिएँ।’ तिनले त्‍यहाँ उभिनेहरूलाई भने, ‘लौ, अब त्‍यसबाट त्‍यो असर्फी खोसेर दश वटा हुनेलाई देओ।’ तिनीहरूले भने, ‘हजुर, उसको त दश वटा छँदैछ नि!’ राजाले भने, ‘म तिमीहरूलाई भन्‍छु, जोसँग छ, उसलाई अझै दिइन्‍छ। तर जोसँग छैन, उसबाट अलिकति भएको पनि खोसिन्‍छ। अब मलाई राजा भएको नचाहने मेरा शत्रुहरूलाई यहाँ ल्‍याएर मेरै सामुन्‍ने मार’!”
 यो सुनेर येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीले अझै एउटा काम गर्न बाँकी छ, तिमीसँग भएका सबै कुरा बेचेर गरीबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीले स्‍वर्गीय धन पाउनेछौ अनि मेरो पछि लाग।” यो कुरा सुनेर तिनी साह्रै खिन्‍न भए किनभने तिनी असाध्‍यै धनी थिए।
 “मानव पुत्र आउने बेलामा चाहिँ एक जना मालिक परदेश गएर घर फर्कने बेलामा भएजस्‍तै हुनेछ। त्‍यस मालिकले परदेश जानुभन्दा पहिले आफ्‍ना नोकरहरूलाई बोलाएर आफ्‍नो पैसा जिम्‍मा लगाइदिए। उनले नोकरको खुबीअनुसार एउटालाई पाँच वटा, अर्कोलाई दुई वटा र अर्को एक जनालाई एउटा सुनको सिक्‍का जिम्‍मा लगाएर परदेशतिर लागे। पाँच वटा सुनको सिक्‍का जिम्‍मा लिने नोकरचाहिँ तुरुन्‍तै गएर त्‍यो पैसा व्‍यापारमा लगाइहाल्‍यो र उसले त्‍यसबाट अरू पाँच वटा सुनको सिक्‍का कमायो। त्‍यसै गरी दुई वटा सिक्‍का जिम्‍मा लिने नोकरले पनि अरू दुई वटा सुनको सिक्‍का कमायो। तर एउटा सुनको सिक्‍का जिम्‍मा लिने नोकरले चाहिँ खाडल खनेर त्‍यसलाई लुकाएर राख्‍यो। “धेरै वर्ष बितेपछि ती नोकरहरूको मालिक फर्केर आए र तिनीहरूबाट आफ्‍नो हिसाब लिए। पाँच वटा सुनको सिक्‍का पाउनेले आएर मालिकलाई भन्‍यो, ‘हेर्नुहोस्, हजुरले मलाई पाँच वटा सुनको सिक्‍का दिनुभएको थियो, त्‍यसबाट मैले अरू पाँच वटा कमाएर ल्‍याएको छु।’ मालिकले भने, ‘स्‍याबास! तिमी असल र भरपर्दो नोकर रहेछौ। तिमी थोरै कुरामा पनि भरपर्दो भएकोले म तिमीलाई अरू धेरै कुराको जिम्‍मा दिन्‍छु। तिमी आएर मसँग रमाऊ।’ त्‍यसपछि दुई वटा सुनको सिक्‍का पाउनेले आएर भन्‍यो, ‘हजुर, तपाईंले मलाई दुई वटा सुनको सिक्‍का दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू दुई वटा कमाएर ल्‍याएको छु।’ मालिकले भने, ‘स्‍याबास! तिमी असल र भरपर्दो नोकर रहेछौ। तिमी सानै कुरामा भरपर्दो भएकोले म तिमीलाई अरू धेरै कुराको जिम्‍मा दिन्‍छु। तिमी पनि आएर मसँगै रमाऊ।’ “त्‍यसपछि एउटा सुनको सिक्‍का पाउनेले आएर भन्‍यो, ‘हजुर, तपाईं कठोर मानिस हुनुहुन्‍छ, तपाईंले आफूले नलगाएको बाली काटेर लिनुहुन्‍छ र आफूले ननिफनेको अन्‍न पनि बटुल्‍नुहुन्‍छ भन्‍ने कुरा मलाई थाहा थियो। यसकारण तपाईंको डरले गर्दा मैले त तपाईंको सिक्‍का खाडलमा लुकाएर राखें। अब लिनोस् तपाईंको सिक्‍का।’ तब मालिकले त्‍यसलाई भने, ‘ए बदमाश र अल्‍छी नोकर! म आफूले नलगाएको बाली काटेर लिने र आफूले ननिफनेको अन्‍न बटुल्‍ने कठोर मानिस हुँ भन्‍ने तँलाई थाहा थियो भने तैँले मेरो पैसा लगेर ब्‍याजमा लगाउनुपर्दैन थियो त? अनि म फर्केर आउँदा केही नभए पनि ब्‍याजसम्‍म त पाउने थिएँ! त्‍यसबाट यो सुनको सिक्‍का खोसेर त्‍यही दश वटा सुनको सिक्‍का हुनेलाई देओ किनभने जोसँग छ, उसलाई अझै दिइन्‍छ र ऊसँग झन् प्रशस्‍त हुनेछ। तर जोसँग छैन, उसबाट अलिकति भएको पनि खोसिनेछ। अब यो बेकामेलाई लगेर बाहिर अन्‍धकारमा फ्‍याँकिदेओ। त्‍यहाँ यसले दाह्रा किट्दै रुवाबासी गरिरहोस्!’
फेरि कति जना मानिसको मनचाहिँ काँडाको घारीजस्‍तै हुन्‍छ। तिनीहरूले परमेश्‍वरको शिक्षा सुनेर पनि यस संसारको चिन्‍ता गर्छन् र धन-सम्‍पत्तिको मायामा फस्‍छन्। त्‍यसैले तिनीहरूले सुनेको शिक्षा हराएर जान्‍छ र कुनै पनि फल फलाउँदैन।
असल मानिसहरूले छोरा-नातिनाहरूको निम्‍ति धन-सम्‍पत्ति छोडिराख्‍छन् तर पापीहरूको धन धर्मीहरूको हातमा पर्छ।
अल्‍छी मानिस गरीब बन्‍दछ तर परिश्रमी मानिस धनी बन्‍दछ।
तर धनीहरू भने धनैले, सहरका चारैतिर भएका अग्‍ला र बलिया पर्खालले झैँ तिनीहरूको रक्षा गर्छ भनी ठान्‍छन्।
‘हामी धनी छौं, हामीले धन कमाएका छौं र कसैले हामीलाई बेइमानी गरेर धन कमाएको भन्‍न सक्‍दैन’ भनी तिनीहरू भन्‍छन्।
यरूशलेमको बचाउको लागि यहूदाका मानिसहरूले लडाइँ गर्नेछन्। तिनीहरूले वरिपरिका सबै जातिहरूका धन-सम्‍पत्ति र प्रशस्‍त मात्रामा सुन, चाँदी र लुगाफाटा लुटेर लिनेछन्।
परमेश्‍वरले कसैलाई धन-सम्‍पत्ति दिनुभयो र त्‍यसमा आनन्‍द मनाउन दिनुभयो भने धन्‍यवादी भएर उसले आफ्‍नो काममा आनन्‍द गरोस्। त्‍यो परमेश्‍वरको दान हो।
परमेश्‍वरले कसैलाई पूरा धन-सम्‍पत्ति, इज्‍जत, अँ, उसले चाहेजति सबै थोक दिनुहुन्‍छ तर ती उपभोग गर्न दिनुहुन्‍न। उसको सट्टामा कुनै परदेशीले ती उपभोग गर्छ। त्‍यो व्‍यर्थ हो, एउटा दु:खको कुरा हो।
याद राख, परमप्रभु तिम्रा परमेश्‍वरले नै तिमीहरूलाई धनी बन्‍ने शक्ति दिनुहुन्‍छ। उहाँ आफैं तिम्रा पुर्खाहरूसित गर्नुभएको करारप्रति आजसम्‍म विश्‍वासी रहनुभएको हुनाले परमप्रभुले त्‍यसो गर्नुहुनेछ।
परमप्रभुको आशिष्‌ले तिमी धनी बन्‍दछौ तर कठोर परिश्रमले तिमीलाई धनी पार्दैन।
 भलो मानिससँग भएको थोरै थोक सबै दुष्‍टहरूले जम्‍मा गरेका धेरै धनभन्दा बढी हो किनभने परमप्रभुले दुष्‍टको बल खोस्‍नुहुनेछ; तर असल मानिसहरूलाई रक्षा गर्नुहुनेछ।
 धनी भएर सङ्कष्‍टमा पर्नुभन्दा दरिद्र भई परमप्रभुको भय मान्‍नु उत्तम हो। घृणाले भरिएको ठाउँमा स्‍वादिष्‍ट मासु खानुभन्दा आफूले प्रेम गरेका मानिसहरूसित साग-सब्‍जी खानु उत्तम हो।
 “यसैले हामीले आफ्‍नै शक्ति र बलले धन-सम्‍पत्ति कमाएका हौं भनी कहिल्‍यै तिमीहरूले नसोच्‍नू। याद राख, परमप्रभु तिम्रा परमेश्‍वरले नै तिमीहरूलाई धनी बन्‍ने शक्ति दिनुहुन्‍छ। उहाँ आफैं तिम्रा पुर्खाहरूसित गर्नुभएको करारप्रति आजसम्‍म विश्‍वासी रहनुभएको हुनाले परमप्रभुले त्‍यसो गर्नुहुनेछ।
धनले धनीको रक्षा गर्दछ, दरिद्रताले दरिद्रलाई नाश गर्दछ,
 “परमप्रभु! म कहिलेसम्‍म बाँच्‍नेछु? म कहिले मर्नेछु? मेरो जीवन कहिले अन्‍त हुन्‍छ, सो मलाई भन्‍नुहोस्।” तपाईंले मेरो जीवन कति छोटो बनाउनुभएको छ। तपाईंको दृष्‍टिमा मेरो जीवनकाल केही होइन। साँच्‍चै, हरेक मानिस एक मुट्ठी सासभन्दा केही बढी छैन। छायाँजस्‍तो मात्र हो! उसले गरेको काम केही मूल्‍यको छैन। उसले धन बटुल्‍छ तर त्‍यो कसले बटुल्छ, सो जान्‍दैन।
 देशमा अधिकारीहरूले गरीबमाथि अत्‍याचार गरेको, तिनीहरूको हक खोसेको र अन्‍याय गरेको देख्‍यौ भने अचम्‍म नमान्‍नू किनभने हरेक अधिकारीलाई ऊमाथिको अधिकारीले हेर्दछ र ती दुवैलाई अझ ठूलो अधिकारीले हेर्दछ। र राजा पनि खेतबारीका उब्‍जनीमा भर पर्दछन्। रकम-पैसाको लोभ गर्ने मानिस कहिल्‍यै अघाउँदैन, धन-सम्‍पत्तिको लोभ गर्ने मानिसले कहिले पनि जति कमाउन सक्‍दैन। यो पनि व्‍यर्थ हो। धन जति बढ्छ, खाने मुख पनि उति नै बढ्छ। तिमीले पाउने भनेको आफू धनी छु भन्‍ने जान्‍नु मात्रै हो। पूरै खाओस् कि थोरै खाओस्, परिश्रम गर्ने मानिसको निद्रा मीठो हुन्‍छ। तर धनी मानिसको धन धेरै भएकोले उसलाई निद्रा लाग्‍दैन र चिन्‍ता भइरहन्‍छ। मैले संसारमा देखेको एउटा विशेष खराब कुरा यो छ: मानिसले आफूलाई चाहिएको बेलामा होस् भनी रकम-पैसा बचाउँदछ र कुनै दुर्भाग्‍यले उसलाई व्‍यापारमा नोक्‍सान पर्दछ र अन्‍तमा आफ्‍ना छोरा-छोरीहरूको निम्‍ति केही छोड्‌न सक्‍दैन। हामी जस्‍तो आयौं, त्‍यस्‍तै यस संसारबाट बिदा लिंदछौं अर्थात् खाली हात। हाम्रा सारा मेहनतबाट हामीले केही लान पाउँदैनौं। के यो साँचो होइन? हामी जस्‍तो आयौं, त्‍यस्‍तै जान्‍छौं। हामीले परिश्रम गर्छौं र हावा समात्‍ने चेष्‍टा गर्छौं, अन्‍तमा के पाउँछौं? हामीले आफ्‍ना जीवन अन्‍धकार र शोकमा, चिन्‍ता, रिस-राग र बिरामीमा बिताउनुपर्दछ।
 सबैले देख्‍न सक्‍छन् कि जसरी मूर्ख र निर्बुद्धि मानिसहरू मर्छन्, त्‍यसरी नै बुद्धिमान् मानिसहरू पनि मर्छन्, तिनीहरू सबैले आफ्‍ना धन-सम्‍पत्ति छोरा-नातिलाई छोडिराख्‍छन्। कुनै समयमा तिनीहरूको आफ्‍नै जग्‍गा-जमिन भए पनि आफ्‍ना चिहान मात्र तिनीहरूका सदाकालका घर हुन् र त्‍यहीँ तिनीहरू सधैँभरि बास गर्छन्। मानिसको महान्‌ताले उसलाई मृत्‍युबाट बचाउन सक्‍दैन, पशुजस्‍तै ऊ मर्नु नै पर्छ। आफैंमाथि भरोसा राख्‍नेहरूलाई के हुन्‍छ, हेर। आफ्‍ना धन-सम्‍पत्ति अघाएर बस्‍नेहरूको के गति हुन्‍छ, हेर। तिनीहरू भेडाझैँ मरेर जानेछन् र मृत्‍युले तिनीहरूलाई खानेछ। धर्मीहरूले तिनीहरूमाथि विजय गर्नेछन्, तिनीहरूका शरीरचाहिँ मृत्‍युलोकमा आफ्‍ना घरदेखि टाढामा चाँडै सडेर जानेछ। तर परमेश्‍वरले मेरो उद्धार गर्नुहुनेछ। उहाँले मलाई मृत्‍युको शक्तिदेखि बचाउनुहुनेछ। कुनै मानिस धनी हुँदा, उसको धन धेरै बढेर जाँदा व्‍याकुल नहोओ, ऊ मर्दा त्‍यो धन आफूसित लिएर जान सक्‍दैन, त्‍यो धन उसले चिहानमा लैजानेछैन। मानिस आफ्‍नो जीवनसँग सन्‍तुष्‍ट छ भने पनि र सफल भएर उसले मानिसको प्रशंसा पाएको भए पनि मृत्‍युमा ऊ आफ्‍ना पुर्खाहरूसँग मिल्‍न जानेछ र त्‍यहाँ सदासर्वदा अन्‍धकार रहनेछ। मानिसको महान्‌ताले उसलाई मृत्‍युबाट बचाउन सक्‍दैन, पशुजस्‍तै ऊ मर्नु नैपर्नेछ।
“हेर, यहाँ एक जना यस्‍तो मानिस छ, जसले सुरक्षाको निम्‍ति परमेश्‍वरमा भर परेन, तर आफ्‍ना धेरै धन-सम्‍पत्तिमा भरोसा राख्‍यो, दुष्‍ट बन्‍नमा नै उसले आफ्‍नो सुरक्षा देख्‍यो।”
२ इतिहास १:११-१२
 परमेश्‍वरले सोलोमनलाई उत्तर दिनुभयो, “तैँले उचित कुरा मागिस्। धन-सम्‍पत्ति, सुनाम वा शत्रुको मृत्‍यु वा आफ्‍नै लागि दीर्घायु नमागेर तैँले मेरा प्रजा, जसमाथि मैले तँलाई राजा बनाएको छु, तिनीहरूमाथि शासन गर्न ज्ञान र बुद्धि मागिस्। म तँलाई ज्ञान र बुद्धि दिनेछु। यसमाथि म तँलाई धेरै धन-सम्‍पत्ति र सुनाम दिनेछु, जुन अघि कहिल्‍यै कुनै राजाले पाएको थिएन न त फेरि कहिल्‍यै कुनै राजाले पाउनेछ।”
१ राजा ३:११-१३
 र उनलाई भन्‍नुभयो, “तैँले आफ्‍नो लागि दीर्घायु वा धन-सम्‍पत्ति वा आफ्‍ना शत्रुको नाश मागिनस्; तर न्‍यायसित राज्‍य गर्ने बुद्धि मागिस्। म तैँले मागेअनुसार गर्नेछु। अघि कसैले नपाएको र पछि पनि कसैले पाउन नसक्‍ने बुद्धि र समझ-शक्ति म तँलाई दिनेछु। तैँले नमागेको कुरा पनि म तँलाई दिनेछु। तेरो जीवनभरि अरू सबै राजाका भन्दा बढी धन-सम्‍पत्ति र इज्‍जत तैँले पाउनेछस्।
जसले ब्‍याज लिएर मानिसबाट अनुचित लाभ उठाई धन बटुल्‍दछ, त्‍यसको धन गरीबमाथि दया गर्नेले पाउनेछ।
 परमप्रभुको स्‍तुति गर! परमप्रभुलाई आदर दिने र उहाँको आज्ञा मान्‍न आनन्‍द मनाउने मानिस साँच्‍चै खुसी हो। असल मानिसका छोरा-छोरीहरू देशमा शक्तिशाली हुन्‍छन्, उसका सन्‍तानले आशिष् पाउँछन्। उसका घर-परिवारले धन-सम्‍पत्ति कमाउँछन् र सधैँ उसको फलिफाप हुनेछ।
पहिले परमेश्‍वरको राज्‍यको खोजी गर र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर अनि उहाँले यी सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिदिनुहुनेछ।
होशियारीसित आफ्‍नो कामको योजना बनाए प्रसस्‍त लाभ हुन्‍छ तर हतार गर्नेचाहिँ दरिद्र हुन्‍छ।
सधैँ कोही न कोही इस्राएली गरीब र अभावमा हुनेछ र तिनीहरूप्रति उदार-चित्तका होओ भनी म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु।
१ कोरिन्थी १६:२
प्रत्येक हप्‍ताको पहिलो दिन सबैले आफ्‍नो आम्‍दानीबाट केही न केही छुट्याएर जम्‍मा गर। त्‍यसो हुँदा म आएको बेला पैसा उठाइरहनुपर्दैन।
तिमीहरू खुसीसँग, करकापमा परेर होइन, तर परमेश्‍वरले चाहनुभएजस्‍तो परमेश्‍वरले तिमीहरूको जिम्‍मामा दिनुभएको बगालको गोठालो बनिदेओ। पैसाको लागि होइन, तर सेवा गर्ने मन लिएर यो काम गर।
 येशूले फेरि भन्‍नुभयो, “कुनै समय एक जना धनी मानिस थियो। ऊ सधैँ दामी-दामी लुगा लाउँथ्‍यो र ऐश-आरामको जीवन बिताउँदथ्‍यो। तर उसको ढोकामा भने एक जना लाजरस भन्‍ने जिउभरि घाउ नै घाउ भएको गरीब मानिस बस्थ्यो। धनी मानिसले खाँदा खसेका टुक्राटाक्री खान पाउँछु कि भनेर उसले हेरिरहन्‍थ्‍यो। कुकुरहरूले पनि वरिपरि आएर उसका घाउहरू चाटिदिन्‍थे। “एक दिन त्‍यो गरीब लाजरस मर्‍यो। स्‍वर्गदूतहरूले उसलाई लगेर अब्राहामको छेवैमा राखिदिए अनि त्‍यो धनी मानिस पनि मरेर गाडियो। नरकमा असाध्‍यै पीडा भोग्‍नुपरेकोले उसले मास्‍तिर हेर्‍यो र अब्राहामको छेवैमा लाजरसलाई देख्‍यो। उसले कराएर भन्‍यो, ‘हे पिता अब्राहाम, ममाथि दया गर्नुहोस्। लाजरसलाई उनको हातबाट एक थोपा पानी भए पनि मेरो मुखमा चुहाइदिनू भनेर पठाइदिनुहोस्। म यस आगोमा छटपटाइरहेको छु।’ तर अब्राहामले उसलाई भने, ‘छोरा, के तिमीलाई सम्‍झना छैन? जीवनमा तिमीले सबै सुखका कुरा पाएका थियौ, तर लाजरसले चाहिँ दुखै-दु:ख पाएको थियो। अहिलेचाहिँ लाजरसले यहाँ सुख र शान्‍ति पाएको छ र तिमीले चाहिँ त्‍यहाँ दु:ख पाइरहेका छौ। फेरि तिम्रो र हाम्रो बीचमा ठूलो खाडल छ। त्‍यसो हुँदा चाहेर पनि कोही वारिपारि आउने-जाने गर्न सक्‍दैन।’ त्‍यो धनी मानिसले भन्‍यो, ‘त्‍यसो भए हे पिता, बिन्‍ती छ, लाजरसलाई मेरो बुबाको घरमा पठाइदिनुहोस्। तिनले गएर मेरा पाँच जना दाजुभाइहरूलाई यहाँ भएका सबै कुरा सुनाएर चेतावनी देऊन् र तिनीहरू यस नरकमा नआऊन्।’ अब्राहामले भने, ‘उनीहरूसँग मोशा र अगमवक्ताहरूले लेखेका धर्मशास्‍त्र छँदैछन्, तिम्रा दाजुभाइहरूले त्‍यही माने त पुगिहाल्‍यो नि!’ धनी मानिसले भन्‍यो, ‘होइन पिता अब्राहाम, त्‍यतिले तिनीहरूलाई पुग्‍दैन। तर कोही मरेको मानिस फेरि जिउँदो भएर तिनीहरूकहाँ गयो भने त तिनीहरूले आ-आफ्‍नो पापलाई मानिलिएर छोड्‍नेथिए।’ तर अब्राहामले जवाफ दिएर भने, ‘मोशा र अगमवक्ताहरूको कुरा नसुन्‍नेले मरेकै मानिस बिउँतिएर गए पनि विश्‍वास गर्नेछैनन्’।”
१ तिमोथी ६:१०
किनभने सब किसिमको खराबीको मूल नै धनसम्‍पत्तिको माया हो। कति मानिसले त धन कमाउने लोभमा लागेर विश्‍वास गर्न छोडिदिएका छन्। अनि दु:खले तिनीहरूको मन नै छियाछिया भएको छ।
त्‍यसपछि येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई हेरेर भन्‍नुभयो, “हे गरीब हो! तिमीहरू कति धन्‍य हौ किनभने परमेश्‍वरको राज्‍य तिमीहरूकै हो।
गरीबहरू धनीको दास बन्‍दछन्, ऋण लिने ऋण दिनेको दास बन्‍दछ।